Zvemabhizinesi Ebhizinesi, iyo Quiet Revolution | Martech Zone
Muvhuro, March 19, 2012 Chipiri, Kurume 20, 2012 Marty Thompson
Zvemagariro midhiya uye zvemagariro matekinoroji izvozvi chinhu chakakosha chekuti makambani anoita bhizinesi sei. Yakave yakanyatsobatanidzwa uye yakabatanidzwa mukushambadzira kwedu kuedza. Vatengesi veDhijitari havagone kutaura nezve zvemukati, SEO, webhusaiti optimization, PR. Vatengi, kunyangwe vachizviziva kana kuti kwete, ikozvino vane basa nyowani rekutamba mukati mekambani kumisikidzwa. Ivo vanoita basa rakasiyana zvakasiyana mune mazhinji evatengesi vehunyanzvi akambodzivirirwa kuseri kwemadziro ekunyarara.
Isu sevatengesi hatikwanise kufunga nezve "kuva munharaunda”Sechimwe chinhu chakaparadzaniswa nemamwe mabasa edu.
Ichi chokwadi chezvemagariro chave kutamira mune chimwe chikamu. Masangano ave kutarisisa kuedza kwavo pamabatiro avangaite mukati, vachitora mukana wezvekushanduka kwesimba rekushandira pamwe.
Kufanana nekufambira mberi kwakaitwa muERP, CRM, kushambadzira otomatiki, uye dzimwe nzvimbo, bhizinesi rezvemagariro nderimwe shanduko yakanyarara, inoitika zvishoma nezvishoma pane dzimwe nguva, nekukurumidza kune vamwe.
Iyo nharo nezve izvo zvemagariro bhizinesi zvinoreva, uye kukosha kupi "iyo" kwainopa, kana iripo, inopenga mune mamwe madenderedzwa. Asi mumaonero angu, inomiririra imwe shanduko yakanyarara. Hatina kumuka zuva rimwe ndokuwana IBM, SAP, Oracle, Salesforce, nevamwe, vakavakwa ipapo, vakagadzirira kutumirwa. Ingobvunza vatambi vebhizimusi ava, uye ivo vachataura zvinomanikidza nyaya dzekuti nei kushamwaridzana chiri chinhu chikuru chinotevera. Ivo vari kugamuchira kushamwaridzana pamwe sechinhu chakakosha. Tariro yangu ndeyekuti isu tese tinogona kushandisa mukana uno kusangounza chete kukosha kweyezve bhizinesi, asi zvakare kupa nzvimbo nyowani panogona kupembererwa nuances yekudyidzana kwakaomarara kwevanhu. Hongu, ndinotenda musimba regeeks.
Iwo mabhizinesi anozobatsirikana kutanga kubva mukuedza uku anogona muchikamu chikuru kutenda avo vakasanganisa zvakafanira zviitiko zvehukama mukushandira kwavo vatengi uye rutsigiro, kushambadzira, nedzimwe nzvimbo dzinoshanda. Ivo vanosanganisira avo vakaita mari dzakakosha mukuvaka maforamu enharaunda ane ruzivo, mapoka ebasa nerutsigiro, akasimba manejimendi manejimendi ekuziva, uye avo vakatora pfungwa yeCRM yemagariro, uye vakavaka pamusoro payo. Iko bhizinesi rezvemagariro kungori kudzokorodza kweaya matanho? Ini ndinofunga mhinduro iri kwete, asi zvizhinji zvezvakadzidzwa, uye zvizhinji zvebhizinesi rekudyidzana munharaunda zvicharatidzika kunge zvichakweretwa nekuedza kwakadai.
Saka, ko bhizinesi rako? Uri kunyatsoziva iwo mabhenefiti echirongwa chakabatanidzwa chekushambadzira chinosanganisira dzakangwara zvemagariro zvikamu? Ndeapi mafungiro ako pane zvazvinoreva kuva bhizinesi rezvemagariro?
Tags: Nharaunda MAnagementDK New MediaMarty ThompsonBusiness Businessevanhu vezvenhau
Ini ndinofunga isu tine makore mazhinji ekuenda kunogadzirisa hutungamiriri hwemakambani kune bhizinesi rezvemagariro. Tichiri kugadzira madhipatimendi emukati kuburikidza nekugadzira mutsara maitiro apo chokwadi chiri chekuti madhipatimendi ese anokanganisa maitiro emhando musocial media - kubva kuhutungamiriri, kugarisana, kusvika pakushambadzira… mushandi wese anoita basa. Nehurombo, handiwo magadzirirwo emiti yedu yesimba, zvakadaro. Isu tinoramba takavharirwa kubva kune ruzivo rwatinoda… uye tinoda!
Kusvika ikoko kuchanakidza, kunyange zvakadaro!